Ikati ye-Abyssinia, yonke into malunga nolu hlobo lweekati | Amakati eNoti
Ukwamkela abanye abantu
UMonica sanchez | | Amakati, Ukuzalela
El Ikati ye-abyssinian Sisilwanyana esithandwa kakhulu: siyadlala kwaye indlela esiziphethe ngayo intle kakhulu. Ukongeza, yayiyenye yeentlanga zokuqala ukwamkelwa, ke ngenxa yokuba ingaziwa kakuhle, akunakutshiwo ukuba itshintshile kakhulu xa kuthelekiswa nabase-Abyssini beenkulungwane ezimbini ezidlulileyo, ngela xesha kwakuqala kuthethwa ngesilwanyana incwadi "iikati, amanqaku abo" umbhali wayo nguGordon Staples.
Ikwayi- inzala yentlalo, ke ilungile njengendawo yokudlala yabantwana ... hayi njalo abantwana children. Ungathanda ukudibana naye? Masiye apho.
1 Imbali ye-Abyssinian
2 Iimpawu ezibonakalayo zohlobo
3 Ukuziphatha kwe-Abyssinian
4 Ukunyamekela olu hlobo
5 Impilo ye-Abyssinian
5.1 Ixabisa malini ikati yase-Abyssinia?
5.2 Iifoto zekati yase-Abyssinian
Ikati ye-Abyssinia, nangona ibonakala ngenye indlela, ayiveli e-Abyssinia (namhlanje iya kuba yi-Ethiopia), kodwa ikholelwa ekubeni ivela eYiphutha. Yintoni eyaziwayo ukuba ikati yokuqala yolu hlobo eboniswe eNgilani yavela e-Abyssinia. Ngo-1874 kwapapashwa incwadi ethi "Amakati, Amanqaku abo", ndenza inkcazo yokuqala ngekati egama linguZula, intshontsho lokuqala lase-Abyssinia elaliphantsi kukaNkskz. uhambo lomkhosi olusuka eAbyssinia. Umzimba wakhe ubonwe kwaye awunamkhondo, kunokuba mncinci, kodwa yomelele kwaye yomsipha.
Kodwa kukho abantu abakhetha ukucinga ukuba olu hlobo luvela eminqamlezweni phakathi kweesilver ezahlukeneyo kunye neebrown kunye neekati zemveli zase-England., i »IBritish Bunny».
Ngayiphi na imeko, ngasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX uhlobo lwalusele lusaziwa, kwaye ngenkulungwane yama-XNUMX. AmaNgesi aqala ngokuzala ngendlela, kwaye ngo-1909 kwafika ithole lokuqala lase-Abyssinia eUnited States. Ngama-1930, ama-Abyssini angeniswa esuka eNgilani abaza kuba ngabaya kufumana iinkqubo ezikhoyo zokuzalisa.
Iimpawu ezibonakalayo zohlobo
Le kati ibukeka kakhulu njenge-cougar, nangona kunjalo kwinqanaba elincinci 🙂. Inomzimba olungelelanisiweyo kunye nobuthathaka, umbono ochukumisayo kunye nentloko entle kakhulu engunxantathu. Kodwa masibone ukuba yeyiphi imigangatho yakho:
Intloko: Ubume obunxantathu, kunye neendlebe ezijikeleziweyo kunye namehlo aluhlaza okwe-almond.
Umzimba: slim, slim, muscular. Imilenze ilingana nomzimba uphela. Umsila mde kwaye unamahlathi.
Uboya: iinwele zifutshane, ziluhlaza okwesibhakabhaka, isilivere, isorrel okanye fawn
U bunzima: phakathi kwe-4 kunye ne-6 kilos.
Izinto ozilindile emhlabane: Iminyaka 13-14.
Le yikati esebenzayo kakhulu, ethanda ukuchitha ixesha layo inyuka, idlala okanye ihlola. Ngesi sizathu, nabani na ofuna ukuba nesilwanyana solu hlobo ekhaya, Kuya kufuneka uthenge amaqhekeza aphezulu afikelela eluphahleni kunye / okanye uqhagamshele iishelufa ezijikeleze indlu ukuze ukwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Ukrelekrele kakhulu kwaye unobuhlobo, uhlala kakuhle kakhulu nabantwana. Mhlawumbi elona cala lililo lelo akathandi ukuba yedwa, kuyacetyiswa ukuba uchithe ixesha elininzi kunye naye, kwaye unikezele loo mizuzu okanye iiyure ukuba ube kunye nesilwanyana, nokuba udlala ibhola okanye uphumle.
Ukunyamekela olu hlobo
Ikati yase-Abyssinia, njengayo nayiphi na ikati eyinxalenye yosapho, kufuneka ifumane uthotho lokhathalelo kunye noqwalaselo oluqinisekisa impilo-ntle yayo:
Kucetyiswa kakhulu mnike ukutya okusemgangathweni, ngaphandle kweesiriyeli. I-Feline zizilwanyana ezitya inyama, kwaye azidingi ukutya okuziinkozo okanye iziphumo zazo (enyanisweni, inokubangela i-aleji). Olunye ukhetho kukumnika ukutya kwendalo, ngaphandle kwamathambo okanye ameva.
Ngenxa yobude obufutshane beenwele zakhe, Kuya kufuneka uyihlambe kube kanye ngemini, enye into ngexesha lokutyibilika. Kwakhona, ukuba ubona ukuba ine-legañas musa ukuthandabuza ukuzisusa nge-gauze engenazintsholongwane.
Xa eyinjana unayokwaye ungamthabathela ntoni ukuze ugonywe, kwaye amthintele okanye abulale iintsholongwane ukuba asifuni ukuyenza ivelise ukusuka kwiinyanga ezi-6 ukuba ingumfazi, okanye iinyanga ezisi-8 ukuba yindoda.
Ukongeza, ngalo lonke ixesha uziva ungaphilanga, kuyacetyiswa ukuba uhambe.
Ayisiyo ikati enengxaki ezininzi zempilo, kodwa inokubonisa utshintsho kwimfuza, njenge I-hernia yeembilini o ukungaphumeleli kwezintso. Kwakhona, ukuba uyabona ukuba uphulukene nomdla wokutya, uphantsi, okanye unengxaki, kuya kufuneka umse kugqirha wezilwanyana ayokumvavanya.
Gcina ukhumbula ukuba ngokukhawuleza ukuxilongwa kwenziwa, ngokukhawuleza unokuchacha.
Ixabisa malini ikati yase-Abyssinia?
Ukukhathalela ikati luxanduva ekufuneka luhleli ubomi besilwanyana. Ukuba uzimisele ngokwenene ukuyithatha, kwaye nosapho lwakho lufuna ukonwabela inkampani yekati yase-Abyssinia, jonga abafuyi abaqeqeshiweyo. Banokucela ezinye 800 euro Kwinjana, kunokubonakala ngathi kuninzi, kodwa akukho nto ifana nokuqinisekisa ukuba uboya obutsha oza kwabelana nabo ngeminyaka embalwa yobomi bakho busempilweni.
Iifoto zekati yase-Abyssinian
Ikati ye-Abyssinia sisilwanyana esihle, kwaye siyathandeka ngaxeshanye. Ke ngoko, siza kuncamathisela eminye imifanekiso yalo mfana ubalaseleyo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati ye-abyssinian
UMonica sanchez sitsho
Asizinikele ekuthengeni nasekuthengiseni.
Ndikucebisa ukuba ujonge umntu oza kuzalela kufutshane nendawo yakho ukuze ufumane ikati oyifunayo.
Yonke into yekati yakho
Khathalela ikati yakho njengoko kufanelekile ngezi ngcebiso sizenzayo kwaye uya kuyithanda. Ukongeza, unokusebenzisa ezinye izibonelelo ezikhoyo ngoku:
Unyango lwasekhaya lweekati ezinamanzi emzimbeni
Ithetha ukuthini ikati ukuba ikulandele
Fumana amanqaku akutshanje malunga neekati.
Izaphulelo kukutya kwekati kunye nezinye izinto